Cabdirahman Ahmed – Shacabka News
Author: Cabdirahman Ahmed
Xukuumada Somalia ayaa wada qorsho ay ku jareyso Mushaaraadka ay qaatan Shaqaale u diiwaan gashan dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Gudigaan sida hoose u wada baaritaanka ayaa sheegay inay jiraan shaqaale badan oo qaarkood aan lagu heyn nolol iyo geeri kuwaa oo si toosa loo qaato mushaarkoodaBaaritaanka la sameeyay ayaa waxaa sidoo kale lagu ogaaday in shaqsiyaad xilal ka haya dowlada ay qaab sharci daro ah u qaatan mushaarka shaqaale ka tirsanaa dowlada oo ku dhintay musiibooyinka ka dhacay dalka.
Docda kale, shaqaalaha la qorsheynaayo in laga jaro mushaaraadka ayaa u dhexeyn doona 1,000 ilaa 1,500 oo lagu sifeeyay inay yihiin mashaqeystayaal
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Xog: Maxaa kala socotaa tirada shaqaalaha DF ee la saadaalinaao in laga jaro mushaarka?
XOG: AMISOM Oo Arrin Xujo Ah Ag Dhigtay DFS, Iyo Howlgalkii La Waday Oo…
Warar si hoose ay u heshay Shacabkanews.com ayaa xaqiijinaya in AMISOM ay arrin ad u xujo ah ag dhigtay dowladda Federaalka Soomaaliya oo dooneysay in la qaado howlgal ballaaran oo ka dhan ah Al-shabaab.
Taliska AMISOM ayaa DFS u sheegay in xilligaan aanay ka qeybqaadan kareyn dagaallada la doonayo in lagu weeraro Al-shabaab.
Waxay tilmaameen in ciidankooda xuquuq badan ka maqan tahay, sidoo kalena aanu hadda qorshaha ugu jirin in la weeraro deegaanno cusub oo Al-shabaab dalka kaga sugan yihiin.
Howlgalkaii DFS ee Al-shabaab ayaa hadda u muqda mid dhicisoobay, maadaama AMISOM ay cudurdaar aan caadi ahayn keentay.
Sidoo kale AMISOM ayaa sheegtay in aysan haysan hub iyo saanad kale oo ku filan, inta ay haystaanna tahay mid ay isku difaacayaan oo kaliya.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on XOG: AMISOM Oo Arrin Xujo Ah Ag Dhigtay DFS, Iyo Howlgalkii La Waday Oo…
Ma Waxaa Qarxay Dagaal u Dhaxeeya Soomaliya Iyo Kenya?
Shalay waxa uu dagaal aa du xooggan dhexmaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya, kadib markii ciidamada la dagaalanka argagaxisada Kenya ay dalka si xadgudub ah kusoo galeen.
Cidamada o indhaha soo xirtay sida Al-shabaabkii sidoo kalena calamo madow ah soo qaatay ayaa xuduudda kasoo tallaay, waliba wax wargelin ah ma aanay sameyn.
Xogta ayaa sheegeysa in hadda abaabul aad u xooggan ay wadaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Gedo, waxaana ay doonayaan iney jilbaha u aastaan Kenyanka soo tallaabaya sharci la’aanta.
Dagaalkii shalay dhacay waxaa cashir lama ilooban ah loogu dhigay ciidamada Kenya oo waxaa laga diley in ka badan 10 askari oo ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran.
Saraakiil ku sugan Gedo, waxay Warqaad.com u sheegeen in saacadaha soo aadan ay ku siqi doonan dhanka xuduudda oo aanay cidna uga hibeysan doonin joogitaanka dhulkooda.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Ma Waxaa Qarxay Dagaal u Dhaxeeya Soomaliya Iyo Kenya?
LA OGAADAY: Al-shabaab Oo Bilaabay Iney Degaan Degmooyinka Ugu Muhiimsan Ee Muqdisho
Maleeshiyada Al-shabaab ayaa hadda waxay bilaabeen iney soo degaan degmooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho.
Markii hore waxay ku badnaayeen degmooyinka Yaaqshiid, Hilwaa iyo sidoo kale Dayniile, hase ahaatee hadda waxay soo galeen faras magaalada.
Waxay soo degeen Hodon, Howlwadaag, Waaberi, Warta Nabadda, X/weyne, X/jajab iyo sidoo kale Shengaani, iyaga oo diidaya in meelaha fog lagu soo ugaarsado.
Hubka ay wax ku ugarsadaan ayaa sidoo kale la sheegay iney soo dhigteen xaafado ku dhow Villa Soomaaliya iyo Villa Baydhabo si aan looga shakin, maadaama xaafadahaasi aanay badi gelin cid aan dowladda ahayn ama askariba ahayn.
Al-shabaab aya badinaya xeeladaha ay adeegsanayaan si ay u xoojiyaan weerarada ka dhan ah dowladda Federaalka Soomaaliya iyo cid walboo dowladda taageersan ama ka agdhow.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on LA OGAADAY: Al-shabaab Oo Bilaabay Iney Degaan Degmooyinka Ugu Muhiimsan Ee Muqdisho
Muxuu Farmaajo Ka Yiri Maxaabiista Ku Xiran India?
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dhawaan ay dalka soo gaari doonaan ku dhawaad 100 Maxbuus oo ku xirnaa Sanado badan dalka Hindiya.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheeri ah ku bixisay sidii loo soo deyn lahaa Maxaabiistaasi oo xilliggaan la kulmaya dhibaatooyin kala duwan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in ay soo deyn doonto Maxaabiista loo heysto Falalka Burcadbadeednimo ee ku xiran dalka Hindiya.
Wadanka India ayaa kamid ah wadamad ugu badan oo ay ku xiran yihiin maxaabiista Soomaalida,kuwaasi oo loo heysto oo fal dambiyeed la xiriira Burcad Badeednimo,inkastoo sanadihii ugu dambeeyey uu hoos u dhac ku yimid weeraradii afduubka maraakiibta.
Sido kale bisha February ee sanadkan ayaa lafilayaa in Soomaaliya dib loogu soo celiyo maxaabiis kale oo iyagana ku xiran xabsiyo kaladuwan oo isla Dalkaasi kuyaala,maxaabiista haatan la sii daayay ayaa horey racfaan u qaatay oo ah in laga qafiifiyo waqtiga,balse waxaa diiday maxakamad kutaala dalkaasi,oo go’aamisay in xukunkoodi ay dhameystaan
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Muxuu Farmaajo Ka Yiri Maxaabiista Ku Xiran India?
XOG: Shabaab Fu’aad Shongole Iyo Saraakiil Kale Oo Dirqi Kaga Badbaaday Ciidanka DFS
Fu’aad Shongole iyo saraakiil kale oo Al-shabaa ka tiran ay si dirqi ah kaga badbaadeen ciidamada DFS Soomaaliya oo howlgal ka sameeyey deegaanno Kamid ah gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidamada ayaa ku dhacay xarun markii hore ay ku shirayej saraakiishan, balse daqiiqado kahor ayey ka baxeen marka howlgalkaan uu dhacayo.
Xogta ciidanka heleen ayaa ahayd in halkaasi ay rag badan ku sugan yihiin,balse waa ay baxsadeen si lama filaan ah, waxaana loo maleeyay in iyaguna ay heleen xog kale oo sheegeysa in dhankooda lagu soo wajahan yahay.
Saraakiishan ayaa sidoo kale la sheegay iney ku jireen rag magac iyo mamuus ku leh Maleeshiyada Al-shabaab, haddii la qaban lahaa ama la dili lahaana Al-shabaab jab xooggan ayaa soo gaari lahaa.
Ciidamada DFS gaar ahaan kuwa Kumaandoosta loo yaqaano ayaa xoojiyey weerarada ay ku bacsanayaan Maleeshiytaadka Al-shabaab.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on XOG: Shabaab Fu’aad Shongole Iyo Saraakiil Kale Oo Dirqi Kaga Badbaaday Ciidanka DFS
Dayaca iyo darxumada Faroole nala damacsanaa Gaas baa damiyey!
Cabdiraxmaan Faroole oo ahaa Madaxweynihii Hore Puntland ayaa laga qoray maqaal dheer ,kadib markii uu ka hadlay Colaada Tukaraq ,edayna u jeediyaay Madaxweynaha Taladda Haya ee Prof Cabdiweli Gaas.
Hoos ka akhri Ama Riix Linkska
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Dayaca iyo darxumada Faroole nala damacsanaa Gaas baa damiyey!
Dhageyso Khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay Magaalada Boosaaso oo uu ku tilmaamay Cadaalada looga baahanyahay dhanka Dhaqaalaha.
Madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa safarkiisa Boosaaso Ku tagaya waxa uu ku jeediyay Khudbad meelo Badan taabaneysa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka Hadlay Xaalada Dalka ka jirta Dhaqaalaha soo xarooday iyo in cadaalad loo qeebsado.
Mudane Farmaajo ayaa sheegay in Dowlada ka qeyb qaadaneyso Dhismaha Puntland isla markana dhaqaalaha Dowlada wax ka heleyso.
Waxa uu intaasi ku daray in taasi tahay Cadaalad madama loo simanyahay dhaqaalaha Dalka.
Halkan Hoose ka Dhageyso Farmaajo.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Dhageyso Khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay Magaalada Boosaaso oo uu ku tilmaamay Cadaalada looga baahanyahay dhanka Dhaqaalaha.
Warshad Caan ah oo ku gubaneysa Muqdisho & Warar Hordhac ah oo kasoo baxaya Khasaaraha
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xarunta weyn ee Warshada Isbuunyada Mubaarak uu dab qabsaday.
Warshadda ayaa la sheegay inuu qabsaday Dab xoog leh oo gebi ahaan baabi’iyey Warshada, isagoo dabku gaaray xarumo Dugsiyo Waxbarasho oo ku dhowaa Warshadda, waxayna dadka degaanka sheegeen in qasaare baaxad leh uu gaaray Warshadda.
Dabka ayaa weli socda, waxaana la tacaalaya Gaadiidka Dab damiska, iyadoo ay ciidamada ammaanka xireen aagga, waana markii labaad ee xarunta Warshadda Isbuunyada Mubaarak oo dab baabi’iyo.
Xarunta wey ee Warshada Isbuunyada Mubaarak ayaa ku taalla degmada Heliwaa, agagaarka Warshadii hore ee Baastada Muqdisho, waxaana u dhow guryo degaan ah iyo laba dugsi waxbasho.
April, 2013 ayay ahayd markii dab ka dhex qarxay Warshada Isbuunyada Mubaarak oo gebi ahaan baabi’iyey xarunta ugu weyn Warshadda oo ay ku bas beeleen qalab iyo hanti wixii dhex yiilay.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Warshad Caan ah oo ku gubaneysa Muqdisho & Warar Hordhac ah oo kasoo baxaya Khasaaraha
Ciidanka Kumaandooska Somalia howlgal ku burburiyey Saldhigii Alshabaab ee degaanka Leego [Sawirro]
Ciidanka kumaandooska Danab ee Xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa Howlgal gaar ah ku burburiyay saldhigii ugu weynaa ee Maleeshiyada Kooxda Alshabaab ay ku lahaayeen degaanka Leego ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada kumaandooska ayaa howlgalkooda ku beegsadya degaanka Leego oo Alshabaab la sheegay inay ka abaabuli jireen Qaraxyada iyo Weerarada.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa sheegay in howlgal gaar ah Ciidamadaasi ay ka fuliyeen Deegaanka Leego ay ku bur buriyeen saldhig Al-shabaab ay lahayeen, waxaana ay dileen in kabadan 10 dagaalame, dhaawacana intaas uu ka badan yaha, isaggoo tilmaamay in gacanta ay ku dhigeen Hub iyo Gaadiidka dagaalka.
Taliyaha Ciidanka Kumaadooska Danab ee Xoogga dalka Soomaaliyeed, G/sare Ahmed Cabdullahi sheekh ayaa isna inoo sheegay in Ciidanka ay kordhiyeen Howgalka iyo weerarada ay ku bartilmaamedsanayaan Kooxda Itaalka daran ee Alshabaab, waxaana dadka shacabka ah uu ugu baaqay in Ciidanka ay ku gacan siiyaan soo sheegida Horjoogeyaasha iyo Maleeshiyaadka firxadka ah ee dhulka hoodka ah ku dhuumanaya.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca kooxda Alshabaab oo ku saabsan howlgalka lagu qaaday xarumahoodii degaanka Lego.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 13/01/2018 13/01/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Ciidanka Kumaandooska Somalia howlgal ku burburiyey Saldhigii Alshabaab ee degaanka Leego [Sawirro]